OEM Rewoda USB-C Hub amin'ny Pd orinasa sy ny mpamatsy | Rewoda
Call Support + 86-755-33525517
Fa Smart Hardware
Fa Household Appliances
Ivelan'ny trano Power Supply
Madio Power Station
3.0 Cable USB
Rewoda Multi-asa Docking tobin'ny 6 ao amin'ny 1
Rewoda USB-C ny Mini Display vavy Port
Rewoda karazana tariby TYPE-C C TO HDMI
Rewoda Hub docking tobin'ny 11 ao amin'ny 1
Rewoda USB-C Hub amin'ny Pd
Rewoda USB C HDMI adaptatera 7 in 1 Hub
7 in 1 karazana C ny HDMI adaptatera
USB-C Hub amin'ny hery fanaterana
Rewoda USB C Hub amin'ny USB3.0 + 1, HDMI: 4K @ 30Hz, VGA, Audi ...
USB-C foiben'ny for macbook
Rewoda USB 3.0 hubs Multi-asa Docking Station
Rewoda USB-C hubs 5 ao amin'ny 1
Midina mifanaraka tsara amin'ny USB Version: 3.0
Type d seranan-tsambo: PD3.0
Zavatra tsy USB-C Hub dia manana asa Multi-interface tsara ao anatin'ny iray mba mitovy ny fitaovana. Ary Multi-USB lovia seranan-tsambo afaka mamaha ny olana ny famerana fifandraisana Macbook seranan-tsambo. Ankoatra izany, io seranan-tsambo Multi-USB lovia ihany koa dia afaka hihaona amin'ny ivelany fanitarana ny fampiasana ny hery hanome mafy ho an'ny solosaina kahie. Afaka mifandray kokoa ny fitaovana miaraka amin'izay koa time.And USB-C ity Hub fanohanana mafana-swappable, plug sy milalao, mora ampiasaina sy maimaim-poana ho an'ny Windows mpamily manohana XP / Vista / 7/8 & Mac OS, Linux. Ary manohana Full-hafainganam-pandeha (5GMbps) mombamomba fitaovana USB. Tsy mety ho an'ny Mac amin'ny TYPE C interface tsara sy ny totozy, mpamaky karatra, sns. Notebook fifandraisana mety kokoa. Video, mety kokoa ny birao fivoriana. Small efijery segondra lasa efijery lehibe. HDMI Audio sy Video hampirindra Output, Sharing Happy Time.
Plugs misy iraisam-pirenena
Zavatra tsy USB-C Hub tamim-pahendrena dia afaka manitsy ny Output malefaka, noho izany dia tsara ho an'ny firenena rehetra. Ary ny portable fiantsonan'ny tena mora entina toy izany fahafahana mamaly mahery. Noho izany, io USB-C Hub no safidy tsara indrindra ho an'ny olona, ​​tena manampy rehefa ivelan'ny trano na ao an-trano.
Interface karazana: 3 x USB3.0, Pd, MD SD sy ny seranan-tsambo, HDMI + RJ45
Soraty amin 'ny seranan-tsambo: PD3.0
More Port, More Tsy manahirana
SD / MD Card slot
PE kitapo in defult
* Amin'ny ankapobeny ny vokatra ho feno an-PE kitapo.
* Customer afaka manome ny fonosana famolavolana ny zavakanto ary afaka manampy mba handamina ny famokarana araka ny famolavolana.
Rewoda tsy miandany mpaninjara fonosana
* Tsy manome fitsipika antsinjarany fonosana famolavolana, mpanjifa dia afaka indray mifototra amin'ny famolavolana ny diecut.
Afaka manolotra santionany araka mpanjifa 'takiana ny boky, ny santionany dia nakòn mpanapaka amin'ny vola lany tanteraka ny lamina bahoaka, ny entana dia tokony ho vola ny mpanjifa.
Antoka / fiantohana / Terms sy Conditions
Tsy manome antoka ny entana ny kalitao. Isika hanome ny mpanjifa rehetra amin'ny vokatra sy ny kalitao ambony indrindra fifaninanana vola an-tsaha ihany.
Afaka manome fanampiana tsara ho an'ny fandefasana entana fomba amam-panao, manome fanondranana antontan-taratasy, ary ny kalitao fisafoana tatitra.
Taorian'ny Service Sales
Manome ny tsara indrindra isika rehefa avy-varotra fanompoana ho an'ny customers.Such toy izao: Misy fanaraha-maso eo amin'ny mpanjifa sy ny soso-kevitra ny tamberina aorian'ny fanaterana mba hanatsarana ny fanompoantsika. Isika fikarohana ny mpanjifa ny varotra varotra conditions.Our solontenan'ny dia mifandray amin'ny mpanjifa sy hanampy ny hamaha olana.
Findainao ve dia ho simba raha tsy lahiny fakana herinaratra ny dovia rehefa feno izany?
Ny hery fitantanana maoderina finday tonga lafatra. Taorian'ny finday feno, ny dovia dia eo amin'ny mazava entana asa, ary ny Output amin'izao fotoana izao dia tena kely. Satria ny bateria dia feno ankapobeny, amin'izao fotoana izao izay afaka hirotsaka tena kely. Amin'izao fotoana izao, ny Chip mamaly ny mijanona avy hatrany sy ny bateria fanovana fomba marary mitsika. Koa hampiasa ny ivelany dovia ny miara-miasa. Amin'ny teoria, tsy misy ratsy ho an'ny telefaonina, satria misy maro ny rafitra fiarovana amin'ny fanaraha-maso ny dingana ity. Na dia izany aza, mihevitra fa rehefa avy mampifandray ny lovia, ny rafitra lasa sarotra atao, sy ny mety ho olana tokoa ho avo, noho izany dia feno manongotra na tsia, dia miakatra ho any aminareo mba hanapa-kevitra. Mandinika fiarovana, nikarakara toe-javatra, fa tsara ny lahiny fakana herinaratra izany.
Mety dovia ny finday azo ampiasaina avy hatrany ao Taiwan?
Arakaraka ny malefaka eo amin'ny lovia, dia matetika ny malefaka pirinty eny ambonin'ny ny dovia;
Raha pirinty 100 ~ 220V izany, dia afaka mampiasa izany ao Taiwan.
Raha toa ianao ihany no pirinty 220V, dia mila mitondra fiovam-po ny faladiany.
Inona no matetika ny finday dovia?
Ny matetika miovaova arakaraky ny firenena samy hafa malefaka.
Shina single-dingana herinaratra matetika dia 50Hz. Araka ny antontan'isa savaranonando, maneran-tokan-dingana manana herinaratra ankapobeny roa ihany peo ny 50 Hz sy 60 Hz, ary ny voltages samy hafa, manomboka amin'ny 100, 110, 120, 127, 220, 230, sy 240.
Ahoana ny fanompoana rehefa avy-varotra?
Tsy manolotra 12 volana Warranty.
Aza misalasala nifandray US!
Next: Rewoda Hub docking tobin'ny 11 ao amin'ny 1
4 Tamin'ny 1 USB-C Hub
8 Tamin'ny 1 USB-C Hub
Varatra 3 USB-C Hub
USB-C Hub Fa Macbook
USB-C Hub Amin'ny Pd
USB-C Hub amin'ny hery Delivery
fiara dovia Qualcomm 3.0
USB-dia lahy To USB-C Male
Power AC adaptatera for Household elektronika
30W Wall dovia haingana mamaly ny Travel dovia ...
fiara dovia ho an'ny iPhone
Shenzhen fahefana adaptatera
Type-C Cable, USB C Hub 8-In-1, Wireless Charger , Qi Wireless Charger, Type-C Hub, Cable USB-C,